I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Dale
Phumula futhi uphumule endlini yethu entsha sha etholakala enhliziyweni yeTagaytay. Kuyindawo ekahle yokucasha kulabo abafuna nje ukuphumula futhi bajabule nemindeni yabo nabangane. Ifinyeleleka ezindaweni zezivakashi, ezitolo ezinkulu nezindawo zokudlela. Ikhaya lethu linamakamelo okulala ama-3 (alungele i-12 pax), amagumbi okugeza angu-2 ane-heater yeshawa. Inekhishi, indawo yokudlela/igumbi lokuhlala eline-Smart TV, i-Wifi ne-Netflix, i-balcony, indawo yokufunda/yokusebenzela, igceke elingemuva elivulekile nendawo okusetshenzwa kuyo enetafula lamabhilidi nemidlalo yebhodi.
Amakamelo okulala: Igumbi lokulala lenkosi eline-airconditioner linemibhede emibili (2) ephindwe kabili etholakala esitezi esiphezulu. Inokufinyelela kuvulandi obheke egcekeni elingaphambili nedolobhana futhi inamafasitela akunikeza ukukhanya kwelanga okuthambile kwasekuseni. Omatilasi be-leatherette nabo bayatholakala ezivakashini ezengeziwe. Igumbi lokulala lesibili nelesithathu eline-airconditioner linombhede osayizi ababili kanye nomatilasi owodwa (1) we-leatherette lilinye ukuze siduduze izivakashi zethu. Sicela uqaphele ukuthi igumbi lesithathu lokulala lisezingeni eliphansi engxenyeni engemuva yendlu. Leli gumbi lenzelwe abantu abadala, abakhulelwe kanye nemindeni enezingane ezisacathula nezinsana.
Ikhishi: Lungiselela ukudla kwakho okuphambili ekhishini lethu elibanzi. Inezinto eziyisisekelo zokupheka ezibalulekile njengompheki wokungeniswa, amabhodwe namapani kanye nezitsha zokupheka. I-rice cooker, igedlela likagesi kanye nesiqandisi esinezicabha ezimbili nakho kuyatholakala ukuze kugcinwe ukudla okuqandisiwe nokudla okubandayo neziphuzo.
Indawo yokudlela/Igumbi lokuhlala: Jabulela ukudla okuhle nenkampani enhle endaweni yethu yokudlela. Isethi ye-tableware eyisisekelo njengamapuleti, izitsha zokuphakela, isipuni kanye nemfoloko nakho kuhlinzekiwe. Iphinde ibe ne-55”Smart TV ene-Netflix enikwa amandla wuxhumo lwe-inthanethi lwe-fiber engu-25mp kanye nemidlalo yebhodi yawo wonke umuntu ezogcina wonke umuntu ejabulile.
Amagumbi okugeza: Kunamagumbi okugezela amabili (2) anendlu yangasese kanye nebhavu elinehitha yeshawa etholakala phansi nangaphezulu.
Indawo yomsebenzi: Jabulela futhi udlale amabhiliyade kanye nebhodi nemidlalo yamakhadi. Iphinde ibe netafula le-bar nezihlalo okuyenza ibe indawo ekahle yokuphumula nokuzijabulisa.
Indawo yokufunda/Yokusebenzela: Indawo ekhethiwe lapho isivakashi sisengakwazi ukwenza isifundo esisheshayo noma isikhathi somsebenzi ngenkathi siseholidini.
Ikhaya lethu lingaphakathi kwesigaba esinendawo ephephile nevikelekile. Iyindawo ekahle yokucasha yezivakashi ezifuna nje ukuphumula kodwa ezisajabule nemindeni kanye nabangane bazo
Iseduze neThe Glens Events Place. Izakhiwo eziseduze eziphawulekayo yi-The Memory Lane, i-Balay Dako, i-Leslie's, i-Starbucks ne-Magallanes Square.
I-Ayala Serin Mall kanye neFora Mall kanye neSonto laseLourdes kuqhele ngemizuzu eyi-10.
Amaseminari kanye ne-Iglesia ni Cristo angaphakathi kwendawo.
Izithelo nemifino emisha idayiswa abathengisi bendawo eduze kweMagallanes Drive.